နှာခေါင်းစည်း ( MASK ) တပ်စေချင် လို့ အရေးယူ တာ လား…? ရိုက်စား လုပ်နေကြတာလား ??? – Let Pan Daily
နှာခေါင်းစည်း ( MASK ) တပ်စေချင် လို့ အရေးယူ တာ လား…? ရိုက်စား လုပ်နေကြတာလား ???
နှာခေါင်းစည်း မတပ် လို့ ဒဏ်ရိုက် ခြင်း နောက်ကွယ် က ရိုက်စားခွင် အချို့….
ယခုတလော မြို့နယ် အတော်များများ မှာ mask မတပ်ရင် ဒဏ်ငွေ ရိုက်ပြီး အရေးယူတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ ခပ်စိတ်စိတ် ကြားလာ ရပါတယ် ။ လူတွေ mask တပ်အောင် အာဏာပိုင်တွေက အမိန့်နဲ့ အရေးယူ လာတဲ့ သဘောပါ ။ ဒီကာလကြီး ထဲမှာတော့ အပြင်ထွက် ရင် mask က မဖြစ်မနေ တပ်ရမှာပါ ။ အရေးယူတဲ့ လူကလည်း မျက်စိလျင်လျင် နဲ့ သေသေချာချာ အရေးယူ ရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အရေးယူတဲ့ နေရာ မှာ ဆင်ခြင်ဉာဏ် နဲ့ အရေးယူသင့် ပါတယ်။
အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း အကို ကြုံခဲ့ ရတဲ့ ဖြစ်စဉ် လို ကားမောင်းလာတဲ့ လူအတော်များများ ဖြစ်နေကြတယ် လို့ ကြားရ ပါတယ်။ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ စည်းကမ်း ကိုပဲ သေချာ နားမလည် တာလား၊ ရိုက်စား လုပ်တာလား ဆိုတာကတော့ ဖမ်းတဲ့ သူ ကိုယ်တိုင် ပဲ သိပါ လိမ့်မယ်။ တာဝန် ရှိသူများလည်း အောက်ခြေ မြေပြင်မှာ ဘယ်လို ဖြစ်နေလဲဆိုတာကို သိကြပြီး ပြန်လည် ပြင်ဆင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဒီကနေ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအကို ရဲ့ ပို့စ်ကို အောက် မှာ ဖော်ပြလိုက် ပါတယ်-
“လှေနံဓါးထစ် နဲ့ Mask Campaignကို အရောင် ဆိုးနေ တဲ့သူတွေ – ကားထဲမှန် ပိတ်စီးတယ် သူတို့ ဆင်းလာ ပါပြောချိန် mask တပ်ပြီး ကျနော် အောက်ဆင်း ရင် mask တပ်ကြောင်း ပြောပြတယ် ။ ကျူပ်ကိုယ်တိုင် က Volunteer ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြ တယ်။
မရဘူး တိုင်းက အမိန့် Mask ၂ခု ၅၀၀၀ တဲ့ဗျာ ။ သူတို့ကြည့်တော့ မေးစေ့ mask တပ်လေးတွေ ။ ကျုပ် တို့ Mask Campaign ထောက်ခံ သူတွေတောင် ငြိုငြင်ရင် ပြည်သူက မကြည်ဖြူတာ ဘာဆန်း လဲ။
သည်လိုရိုက်စားတွေကြောင့်ပေါ့ Mask Campaign ရုပ်ဆိုးနေ ရတယ် ။ ထွေအုပ်တွေ ကို သေချာ သင်ပေးကြပါ လုပ်လိုက်ရင် ပေါက်ကရ တွေချည်းဘဲ။ လူကြီးတွေ သိအောင်ပြောပြကြပါဦး။ ”
လုပ်အားခ တောင်းသဖြင့် သေနတ် ဖြင့် ပစ်ခံ ရသည့် မြန်မာ အလုပ်သမား မိသားစု ထိုင်းဘုန်းကြီးကျောင်း ၌ ဒုက္ခရောက်နေ ဟုဆို